Dzivirira MacBook Pro yako nyowani kubva muna2017 neiyi sleeve yekudzivirira | Ndinobva mac
Vhiki rapfuura rapfuura takadzidza kuti Apple yaivandudza mutsetse wese wemalaptop mune iyo renji MacBook Pro, ichivaita vane simba rakawanda kubva muruoko rwema processor matsva. Neichi chikonzero isu tinofungidzira kuti kubva ikozvino kutengesa kwerudzi urwu rwe laptop kunowedzera zvakanyanya uye pamwe nevashandisi vachange vachitsvaga sarudzo dzekuchengetedza senge kupenga.
Neichi chikonzero, isu tiri zvekare zvakare kukuratidza imwe nyowani yekudzivirira sarudzo yemhando iyi yekomputa pamutengo wakanaka. Iri bhegi remukati rakaputirwa rinoda bvumidza iwe kutakura yako MacBook Pro zvakachengeteka.
Kana iwe uchida kuchengeta yako nyowani nyowani kure kubva zvingangoitika mapundu uye kukwenya, tinokukurudzira kuti iwe ufunge nezve mukana wekutenga chifukidziro senge iyo yatinoisa muchinyorwa chino. Mumusika mune sarudzo dzisingagumi, asi muSoy de Mac Isu tinotsvaga akanakisa iwo achifunga kukosha kwemari.
Sezvauri kuona mumifananidzo yatakabatanidza muchinyorwa chino, chivharo chekudzivirira icho chatinofunga nhasi chinowanikwa muavara mana uye chakagadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro. Dhizaini yaro yazvino uye maererano nekushomeka kwayo tinogona kukuudza izvozvo Iine homwe dzinoverengeka dzekunze pamwe nekuperera kwazvo mukati.
Iyo kesi yakavharwa neiyo yakasimba uye yakavanda zipi iyo inoita kuti kana iwe ukavhura kana kuvhara iwe haugone kukwenya mutumbi weMacbook nayo. Mutengo waro, ye13-inch MacBook Pro Iwo ma18,10 euros, asi iwe unogona kusarudza mamwe ma diagonals pamitengo yakafanana. Ichokwadi sarudzo yekufunga kana iwe uchitova neApple laptop kana kana uri kufunga nezve kutenga imwe yeiyo nyowani MacBook Pros kubva 2017.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Dzivirira yako nyowani 2017 MacBook Pro neiyi yekudzivirira ruoko
Vhidhiyo kuenzanisa kweMacBook Pro 2017 nyowani neMacBook Pro 2016